Sarkaal sare iyo Ciidamo ka tirsanaa Ahlusunna oo ku Biiray Dowlada Soomaaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Sarkaal sare iyo Ciidamo ka tirsanaa Ahlusunna oo ku Biiray Dowlada...
Sarkaal sare iyo Ciidamo ka tirsanaa Ahlusunna oo ku Biiray Dowlada Soomaaliya
Dhuusamareeb (Halqaran.com)- Cabdul Daahir Rooble Cadde oo ahaa Taliye ciidan oo ka tirsanaa Ahlusunna, oo isku soo dhiibay ciidanka dawlada soomaaliya,asaga oo wata gaadiid dagaal iyo ciidamo aad u hubeysan.
kadib markii ay kulan saacado badan qaatay oo uu la yeeshay Taliyaha Guutada 15 aad ee qeybta 21aad Ciidanka Xoogga Gen Mascuud Maxamed Warsame, iyadoona wadahadal dheer kadib oo ku qancay in uu ku biiro dhanka dowladda federaalka Soomaaliya.
Kulanka dhexmaray Taliyaha Guutada 15 aad ee qeybta 21aad Ciidanka Xoogga iyo Taliye Cabdul Daahir Rooble ayaa waxaa ku wehlinayay Maxamed Axmed Cantoobo Guddoomiyihii hore degmada Hodan ee Gobolka Banaadir.
Taliyihii Ahlusunna ee Guriceel iyo Ciidamo uu watay ayaa xalay gaaray Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug, iyadoo halkaas ay kusoo dhaweeyeen Saraakiil ka tirsan Ciidamada dowladda ee halkaas ku sugan.
wax war ah oo ka soo baxay majiraan illaa iyo hada Hoggaanka sare ee Ahlusunna oo ay uga hadlayaan tallaabada uu qaaday Taliye Cabdul Daahir Rooble Cadde, iyadoona ay xusid mudan tahay in dhawaan Ciidanka dowladda ay si buuxda gacanta ugu dhigeen Degmada Guriceel oo in muddo ay ku sugnaayeen Ciidanka Ahlusunna Waljameeca.